Dhismaha Gölcük Yüzbaşılar Isweydaarsiga ayaa Bilaabmay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara77 YalovaDhismaha Gölcük Yüzbaşılar Bridge
Dhismaha Gölcük Yüzbaşılar Bridge
20 / 06 / 2018 77 Yalova, GUUD, WADADA, TURKEY
Dawlada hoose ee Kobanheegan waxay calaamad u tahay cufnaanta si aan kala go 'lahayn isgoysyada isku xira si loo yareeyo taraafikada magaalada. Muuqaalada ay mashquul yihiin sababtoo ah nalalka taraafikada ayaa loo siman yahay iyaga oo diyaarinaya hal mid. Burburinta nalalka taraafikada ee isgoysyada ayaa isku xira taraafikada. Isbeddelada isgoysyada iyo isgoysyada ee wadooyinka waawayn ayaa yareeya xawaaraha gaadiidka ee magaalada.
SHAQOOYINKA DHALINYARADA IYO KORONTADA
Wasaaradda Gaadiidka ayaa sidoo kale ka dhigaysa isgoysyada isgoyska Gölcük Yüzbaşı. Kadib Xameegta 2, Centurion Junction, Degirmendere iyo Gölcük waxay noqon doonaan saddexda jihaad ee Gölcük. Mashruuca, kaas oo sii wadaya shaqooyinka qodista, codsi culus oo la taaban karo ayaa loogu talagalay kanaalka maraya isgoysyada. Marka goynta isgoysyada la dhammeeyo, socodka gaadiidku wuxuu noqon doonaa gaadiidka gobollada, mana jiri doono gawaarida baabuurta ee gobolkaas. Isgoysyada isgoysyadu waxay sameyn doontaa isku socodka gaadiidka iyada oo isla mar ahaantaana ay badbaadinayaan waqti iyo shidaal.
XAQIIQOOYINKA KA BIXIYAA
Marka mashruuca isgoyska ee D-130 la dhammeeyo, gobolka ciriiriga gaadiidka waxaa la abuuray siiba gaar ahaan gaadiidka gaadiidka ee dhexmara iyaga oo qaadan doona neef. Ka dib markii isgoyska Gölcük-2, isbeddelka Captain, oo haatan gacanta ku haya nalalka taraafikada, ayaa neefta ka qaadi doona isgoysyada iyo buundooyinka. Mashruucu wuxuu sidoo kale baabi'in doonaa nalalka gaadiidka ee Captain. Yalova iyo Izmit oo loo jiheeyo wareega wareega ee isgoysyada.
Baaxadda mashruuca, biriijka giraanta fudud ee leh 190, oo ah qiyaastii mitirka 8, ayaa la dhisi doonaa. By bixinta daahfurnaanta aagga isgoyska, degaannada ku hareereysan ayaa lagu hayn doonaa muddo dheer si looga tago meel nabdoon oo ku habboon wareega wareega iyo hoosta birta hoosteeda oo leh jimicsiga ugu yar yar.
Jaranjarada Bridge ee Hawlaha Gogolka ee Gölcük
Jaranjarada Jajabka ee Gölcük Calaamaduhu waa dhammaatay
Gölcük wuxuu ku yaallaa Wadooyinka Xiriirinta
Iskuxidhka Kartida - Ka Badbaadi Waqtiga iyo Shidaalka
Dharbaaxo Wax-qabad ah oo ku xiran Köşulu
Captions Bridge Bridge
Buyukakin, Dib-u-eegista Iskuduwaha Baabuurta
Dhismaha Isgaadhsiinta Erciş Bridge
Isbedelka Gölcük 2
Ardayda Dib Looga Celiyey Xarunta Alsancak